“Haddii Saxaafaddii Been Iyo Cay Qorto Waxbay Inaga Xumaynaysaa, Madax-Dhaqameed, Ama Suldaanka Maxaa Soo Galiyay Wax Lagu Eedayn Karo,…”Guddoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi – Araweelo News Network (Archive)
“Haddii Saxaafaddii Been Iyo Cay Qorto Waxbay Inaga Xumaynaysaa, Madax-Dhaqameed, Ama Suldaanka Maxaa Soo Galiyay Wax Lagu Eedayn Karo,…”Guddoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi
Hargeysa(ANN)Guddoomiyaha Xisbiga tallada haya ee KULMIYE. Muuse Biixi Cabdi, ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyay dhaliilo loo jeediyay xukuumada oo la xidhiidha xadhiga mid ka mid ah salaadiinta Somaliland oo xukuumadu xabsiga u taxaabtay todobaadkan iyo sidoo kale
xadhiga Guddoomiyihii Wargeyska Madaxa banaan ee Waaheen Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto) oo Maxkamada Gobolka Hargeysa sadex sanadood oo xadhig ah iyo lix malyan oo ganaax adag ah ku riday Sabtidii. Kadib markii lasoo gebagebeeyay dacwad ka dhan ah oo maxkamadda ka socotay mudooyinkii u danbeeyay.
Guddoomiyuhu wuxuu sidaa ka sheegay khudbad uu maanta ka jeediyay xaflad loo sameeyay Arday oo ka qalin jabiyay Jaamacada Golis ee magaalada Hargeysa oo lagu qabtay Huteelka Maansoor.
Muj. Muuse Biixi oo ka jawaabayay dhaliilo xukuumadda loo jeediyay oo la xidhiidha cabudhinta Saxaafada waxa uu yidhi, “Reer Xamarka ayaa ku maahmaaha cimrigaaga oo raagay Geel dhalaayana wuu ku tusaa. Imika wuxuu cimrigeenu ina tusay UDUB oo saxaafadii u ooyaysa iyo KULMIYE oo saxaafadii lagu canaananayo nolasha ayay ka mid tahay. Waxaan uga mahad naqayaa qolada UDUB haddii aad tidhaahdeen mucaaridadayadu waa mid wax dhisaysa oo waanu idinla shaqaynaynaa.
Waxaanu leenahay intaas in leeg ayaanu labada gacmoodba idiin soo taagaynaa inaynu dalka wada leenahay oo aynu ka wada tashano niman idin fogayna oo wax la sii jeesanaya ma nihine’e soo dhawaada walaalayaal ayaan leeyahay qoladaa UDUB.”
Guddoomiyaha KULMIYE oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Horta arrintan saxaafada, horta KULMIYE saxaafadu waa tii in badan soo garab joogtay oo qolada UDUB waxaabay odhan jireen way naga eexanaysaa, kamay eexan jirin wixii ay la ahaato ayuun bay sheegayeen.
Haddii saxaafaddii been iyo cay ay qorto waxbay inaga xumaynaysaa. Nin weyn oo sodog ah oo Hargeysa dhex jooga haddii lagu yidhaahdo waxaa ayuu xaday oo laba kun oo jariiradood iyo laba Telefishan laga sii daayo, haddii uu yidhaahdo ima qabato oo dambigaasi waa la i saaray, markaa ma saxaafadii ayaa la cabudhiyay. Saxaafada waanu ogolnahay inay naga gardaraatana waanu ogolnahay, waanu ogolnahay intii aanu qeylinaynay in leeg in nalagu qayliyo.”
Guddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlayay Xadhiga Boqor Raabi wuxuu yidhi “Waxa la yidhi, Sodoh ayaa nin dhirbaaxay, gartii ayaa geedka la keenay waa la is weydiiyay waxa la yidhi Sodohda halka gacanta inanka inanteeda qabaa gaadhayo maxaa keenay? Iyadaba maxaa halkaa keenay. Madax dhaqameed wax lagu eedayn karo maxaa soo galiyay.ninka Suldaanka ah soo afkiisa iyo adinkiisuba inuu noqdo mid ku dayasho mudan ma aha Isaga iyo kuwa sharciga ilaaliya ee dhawrayaa inay isa soo gaadhaanba ma aha.
Waxase aanu ogolnahay dawladu ha u dul qaadato.KULMIYE ma diidayo in la faalleeyo, ma diidayo in lala kaftamo. Wixii laf jab ah aynu iska dayno ayaan leeyahay.”
Guddoomiyaha Kulmiye isagoo ka hadlaya dhaliilaha loo jeediyo xukuumadda cusub, waxa uu yidhi, “Waxa la yidhi fulle xantii ma mooga, KULMIYE iyo dawladiisa waxa lagu xamanayaa intii ay yimaadeen busaarad ayaa dalkii jiidhay waxba la isu qarinayaa. Ii dhego nugloow oo dhakhso ii dhufo, dadka waanu u dhego nugul nahay sidii aynu ku balanay, shacbigii na doortay ee yidhi waanu idin tijaabinaynaa haddii aanu idin garan waynana fartii halkii ayay ii taalaa waanu u dhego nuglaanaynaa. Waar gari ILAAHAY ayay taqaanaaye’e KULMIYE nin mushaharo qaadanayay oo lacag xaq ah qaadanayay oo aanu ka goynay haddii uu jiro anagaa dambigaa leh. Laakiin waxaad na tidhaahdeen waxaad xooga saartaan in xoolaha ummadda la ilaaliyo oo halka ay ku mudan yihiin la geeyo, labadaa qodob haddii aanu fulino maxaa dhacay,”ayuu yidhi Muuse Biixi
Published January 23, 2011 By info
Qoraaga Buuga Weerane Oo Markii U Horaysay Ka Hadlay Xadhigii Kooxda UFO Iyo Doorkii Uu Ku Lahaa Guddoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe Oo Xidhiidh La Lahaa Gaani
Dafcadii Labaad Ee Shaqaalaha Dawlada Saddex Wasaaraddood Oo U Fadhiistay Imtixaanka Qiimaynta